CUDURKA KOLEERAHA Login
Current Articles Archives Search CUDURKA KOLEERAHA
Cudurka koleeraha ayaa ka dilaaca sanad walba wadamada saboolka intooda badan, sababana dhimasha aan yareyn . Dalka somaliya ayaa ka mid ah wadamada uu sida joogtada ah ugu dilaaco cudarkani, dhowrkii sano ee la soo dhaafay dad badan ayaa u le’day cudurkan sababtii gobolo badan oo somaliya ka mid ah, bishii maarso sanadkii 2000 oo keliya dad gaaraya 1191 qof ayuu cudurka koleerahu ku dhacay 63 qof oo dadkaa ka mid ahi waxay u dhinteen cudurkan sababtii ka dib markii uu cudurkani ka dilaacay shan gobol oo somaliya ka mid ah ( Banadir,Bari, hiraan,shabeelada dhexe iyo shabeelada hoose ). Hadaba in wax laga sheego cudurkan waxa uu yahay siyaabaha looga hortigi karo loona xakameyn karo faa’fidiisa ayaa ah mid lama huraan ah si uu mushtamacu uga qaado aragti guud. Inta aanan u gada gelin wax uu yahay cudurka kuleeraha ayaan waxaan door biday inaan kala saarno farqiga u dhexeeya cudurka koleeraha iyo cudurka daacuunka cudurka daacuunka oo ay dad badani isku qaldaan. Soomaalida ayaa in badan ku magacawda koleeraha daacuun calooleed. Balse marka loo noqdo cilmiga sayniska koleeraha iy daacunka ayaa ah laba cudur oo kala duwan oo ay sababaan laba nooc oo bakteeriyada ka mid ahi.
4)- Gacmaha oo lagu dhaqdo saabuun markasta oo aad suuliga gasho ama ay gacmahaagu taabtaan wax saxaro ah. Daaweynta iyo xanaaneyta bukaha cudurka koleeraha:
12181 Views :: 426 Comments :: :: Health